बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू - Getcontact
कसरी म सम्पर्क पाउन सक्छु?
थप सहायता, सूचना निवेदन गर्न, प्रतिक्रिया प्रदान गर्न वा एउटा गुनासो बुझाउन तपाईंले हाम्रो समर्पित समर्थन टोलीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ l कृपया हाम्रो सहायता टोली यहाँ पाउनुहोस्: https://www.getcontact.com/send-report
Getcontact ले डाटा कसरी प्रयोग गर्छ?
Getcontact ले के उद्देश्यको लागि र कसरी डाटा प्रयोग गर्छ भन्ने बारे पुरा खुलासा हाम्रो गोपनियता कथनमा पाउन सक्नुहुन्छ [https://www.getcontact.com/privacy] यद्दपी मुख्य बुँदाहरु निम्न संक्षिप्त बनाउन सकिन्छ;
- हाम्रो सेवाहरु सक्षम गर्न, अप्टिमाइज गर्न, व्यक्तिकृत गर्न, वितरण गर्न र सुधार्न l
-कानुनी दायित्वहसँग मेल खान, जसमा ठगि विरुद्ध रक्षा गर्न, स्प्यम पहिचान गर्न र लागु हुने कानुनले आवश्यक मान्दा नियमनकारी अधिकारीहरुलाई खुलासा गर्न l
-Getcontact र हाम्रो प्रयोगकर्ताहरुको अधिकार र सुरक्षा रक्षा गर्न जसमा स्प्यम र अनावश्यक कलरहरुको पहिचान पनि पर्छ l
-तथ्यांकीय र विश्लेषण सम्बन्धी उद्देश्यहरुको लागि
के Getcontact ले मेरो ठेगाना बुक डाटा सार्वजनिक गर्छ वा खोजिने बनाउछ?
होइन, ठेगाना पुस्तिकाका तपाईंका सम्पर्कहरू खोज्न मिल्ने गरी कहिले पनि अपलोड गरिदैन र सार्वजनिक गरिदैन । जब तपाईं हाम्रो डाइरेक्टरीमा प्रमाणीकरणको लागि कुनै नम्बर खोजी गर्नुहुन्छ वा तपाईंले कुनै सम्पर्कको प्रोफाइल हेर्नुहुन्छ, उक्त नम्बर वा Getcontact प्रोफाइल हाम्रो डाइरेक्टरी सेवाभित्र मात्र हेर्न सकिन्छ । हाम्रो वैधानिक पयोजन भन्दा बाहिर गैर ठेगाना पुस्तिका अपलोड गर्ने वा प्रक्रिया गर्ने प्राविधिक वा संचालन क्षमता Getcontact सँग छैन ।
के म मेरो नम्बर Getcontact डिरेक्टरीबाट हटाउन सक्छु?
हो, पक्कै पनि । तपाईं यी सामान्य चरणहरू पालना गरेर आफ्नो नम्बरलाई सूचीबाट हटाउन सक्नुहुन्छ । गोपनियता व्यवस्थापन > दृश्यता सेटिङहरू
के म मेरो डाटा Getcontact बाट स्थायी तरिकाले मेट्न सक्छु?
हो, नि:सन्देह । हामी यदी तपाईंको देशमा उपलब्ध छ भने यहाँ पाउन सकिने हाम्रो गोपनियता व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत तपाईंका सम्पूर्ण जानकारी र तपाईंको प्रोफाइलसँग सम्बद्ध डेटा मेटाउन सक्छौं । https://www.getcontact.com/manage कृपया याद राख्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो डेटा र खाता मेटाएपछि तपाईंले Getcontact सेवाहरू प्रयोग गर्न र यसको लाभ लिन सक्नुहुने छैन ।
ट्याग भनेको के हो? कसरी म ट्यागहरु थप्न सक्छु?
कुनै Getcontact प्रयोगकर्ताको लागि अन्य प्रयोगकर्ताले थपेका जानकारीहरू (उपनाम, नाम, आदि) लाई ट्याग भनिन्छ । यी ट्यागहरू प्रयोगकर्ताद्वारा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
प्रयोगकर्ताको प्रोफाइलमा पाउन सकिने “ट्याग थप्नुहोस्” खण्डमा गैर तपाईंले अन्य Getcontact प्रयोगकर्ताका लागि ट्यागहरू थप्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले मेन्युको “छरितो ट्याग थप्नुहोस्” मेन्युमार्फत पनि एपमा साइन अप गर्दा यो कार्य गर्न सक्नुहुन्छ ।
के म ट्यागहरु आफै थप्न सक्छु?
Getcontact समुदायको मापदण्ड अनुसार, तपाईं अन्य प्रयोगकर्ताका लागि मात्र ट्याग थप्न सक्नुहुन्छ; यद्यपि आफ्नो ट्यागहरू भने व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ ।
कसले मेरो प्रोफाइलमा ट्यागहरु थप्यो के म त्यो हेर्न सक्छु?
आपत्तिजनक ट्यागहरू रोक्नका लागि हामीसँग फिल्टर गर्ने प्रणाली रहेको छ जसलाई हामी निरन्तर सुधार गर्ने गर्छौं । हाम्रो एल्गोरिदम झन् राम्रो बनाउनका लागि हामी तपाईंलाई आपत्तिजनक र अनुचित ट्यागहरू रिपोर्ट गर्न अनुरोध गर्छौं । यसले हामीलाई हाम्रो प्रविधि विकास गर्न सहयोग गर्छ ।
कसरी म मेरो ट्याग व्यवस्थित गर्न वा मेट्न सक्छु?
हाम्रो गोपनियता व्यवस्थापन केन्द्रबाट तपाईंको प्रोफाइलसँग सम्बन्धित कुनै पनि ट्यागहरू हेर्न, व्यवस्थापन गर्न वा मेटाउन सकिन्छ (https://www.getcontact.com/manage)
Getcontact प्रयोग गर्ने इमेल एड्रेस म कसरी परिवर्तन गर्न सक्छु?
तपाईं तलको मेन्युमा रहेको “अन्य” खण्डबाट “प्रोफाइल देखाउनुहोस्” मा गएर आफ्नो इमेल ठेगाना सम्पादन सक्नुहुन्छ ।
कसरी म मेरो फोन नम्बर सम्पर्कमा अदृश्य बनाउन सक्छु?
तपाईं आफ्नो दृश्यता निम्न लिंक मार्फत चयन गर्न सक्नुहुन्छ: https://www.getcontact.com/manage
कृपया याद राख्नुहोस् कि कुनै पनि परिवर्तन हाम्रो सर्भरहरूमा लागू हुन 48 घण्टासम्म लाग्न सक्छ ।"
के म मेरो Getcontact प्रोफाइलमा अर्को नम्बर थप्न सक्छु?
हाल तपाईंको Getcontact प्रोफाइल एउटा नम्बरसँग मात्रै सम्बद्ध रहन सक्छ ।
Getcontact मा मेरो प्रोफाइल नाम कसरी बदल्न सक्छु?
एप्लिकेसनमा प्रोफाइलको सेटिङ ट्याबमा गएर तपाईं आफ्नो देखिने नाम सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले सम्पादन गर्दा तपाईंको अद्यावधिक गरिएको प्रोफाइल नाम खोज परिणाममा प्रथामिकताका साथ देखाइन्छ ।
ट्रस्ट स्कोर के हो?
ट्रस्ट स्कोर Getcontact इन्जिनियरहरुले बनाएको एउटा विशेष विश्लेषण गर्ने प्रविधि हो जसले फोनको फ्रड (ठगि) विरुद्ध लड्छ । ट्रस्ट स्कोर १ देखि १० को स्केलमा हिसाब गरिन्छ ।
ट्रस्ट स्कोरले कसरी काम गर्छ?
थुप्रै अल्गोरिदमहरु जोडेर हामीले ट्रस्ट स्कोर आंकलन गर्छौं जस्तै
फोन नम्बरमा प्रतिक्रिया
फोन नम्बरको स्पाम क्रियाकलापहरु ।
र विभिन्न दर्जनौं एल्गोरिदमहरुले हाम्रो एआइ प्रविधिलाई चाहिने कुराहरु दिन्छ ताकी हामी त्यो नम्बरको लागि एउटा ट्रस्ट स्कोर हिसाब गर्न सक्छौं ।
के म ट्रस्ट स्कोरमा पुरा विश्वास गर्न सक्छु?
हैन! Getcontact ले केवल आंकलन गर्छ र यी स्कोरहरु बाध्यकारी हुँदैनन् ।
मेरो सित्तैमा प्रयोग गर्ने अधिकार कहिले नवीकरण हुनेछ?
तपाईंका सीमाहरू प्रत्येक महिनाको पहिलो दिनमा नवीकरण हुन्छ । आफ्नो बाँकी सीमाहरू हेर्नका लागि, तपाईंले निम्न चरणहरू पालना गर्न सक्नुहुन्छ: अन्य> सब्स्क्रिप्सन जानकारी ।
किन एक पटकको पासवर्ड "ओटिपि" आवश्यक छ?
सम्पर्क नम्बर वा Getcontact प्रोफाइलको हितग्राही स्वामीको रूपमा पर्याप्तरूपमा प्रमाणित भएको व्यक्तिले मात्र पहुँच प्राप्त गरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने गरी हाम्रो प्रमाणीकरण प्रक्रिया विकास गरिएको छ । यो प्रमाणीकरण प्रक्रियाको भागको रूपमा हामी हाम्रो खाता सेटिङ तथा गोपनियता व्यवस्थापन केन्द्र (https://getcontact.com/manage) पहुँच गर्न एक-पटक-प्रयोग गर्न सकिने पासवार्ड ‘OTP’ सिर्जना गर्न अनुरोध गर्छौं ।
के म नामले खोज्न सक्छु?
Getcontact ले प्रयोगकर्ताहरूलाई नम्बरद्वारा मात्रा पहिचान गर्छ । दुर्भाग्यवश नामद्वारा खोजी गर्न सम्भव छैन ।
किन म सबै कलमा कलरको जानकारी देख्न सक्दिन?
Getcontact आफ्नो प्रयोगकर्ताहरूको गोपनियताको ख्याल गर्छ । हामी देखिन नचाहने प्रयोगकर्ताको नम्बरको लागि प्रमाणीकरण प्रदान गर्न सक्षम छैनौं ।
म एउटा आइफोन उपकरण प्रयोग गर्छु l किन म एउटा इनकमिंग कलरको पहिचान देख्न सक्दिन?
iOS यन्त्रहरूमा, स्पामको रूपमा चिन्ह लागिएको कलहरू मात्र पहिचान गरिन्छ । Android यन्त्रहरूमा यो सेटिङ सक्षम गरिएको छ । यदि तपाईंले कलरको पहिचान देख्न सक्नुभएन भने तपाईंले एपमा आवश्यक अनुमति प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले एप्लिकेसनमा अनुमति प्रदान गरेर वा आफ्नो मोबाइल यन्त्रको सेटिङमा गएर यो फिचर सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ ।
कसले मेरो नम्बर खोज्यो के म बुझ्न सक्छु?
होइन ! तपाईंको नम्बर कतिपटक र कुन मितिमा खोजी गरियो भन्ने बारेमा Premium प्रयोगकर्ताहरूलाई मात्र सीमित जानकारी प्रदान गरिन्छ । तपाईंले आफ्नो ट्याग हेर्ने मानिसहरूहरू मात्र विस्तृतमा हेर्न सक्नुहुन्छ । यद्यपि, तपाईंले यो जानकारी पहुँच गर्नका लागि तपाईंको ट्याग हेर्ने मानिसले आफ्नो सेटिङमा “निजी मोड” निष्क्रिय गरेको हुनुपर्छ । यदि “निजी मोड” सक्रिय भएमा तपाईंले यस व्यक्तिलाई “अज्ञात” को रूपमा देख्नुहुनेछ ।
अपरचित कलरहरुलाई किन पहिचान गरिँदैन?
थाहा नभएका कलरहरूलाई GSM अपरेटरहरूले व्यवस्थित गर्छन् । Getcontact लाई पहिचान अनुमति दिनका लागि नम्बर थाहा नभएको हुनुहुँदैन ।
कसरी म मेरो कल/सर्च इतिहास मेट्न सक्छु?
यदि तपाईं iOS यन्त्र प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने;
तपाईं आफ्नो सम्पूर्ण खोजी इतिहास खोजी मेन्युमा “सबै खालि गर्नुहोस्” बटनमा ट्याप गरेर मेटाउन सक्नुहुन्छ ।
यदि तपाईं Android यन्त्र प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने;
तपाईं आफ्नो सम्पूर्ण खोजी इतिहास माथिल्लो मेन्युमा “खालि गर्नुहोस्” बटनमा ट्याप गरेर मेटाउन सक्नुहुन्छ । ख्याल गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो कल सूची खालि गर्नका लागि तपाईंले आफ्नो फोनको कल इतिहास पनि खालि गर्नुपर्छ ।
के Getcontact एउटा पैसा लाग्ने एप्लिकेसन हो?
तपाईं नि:शुल्करूपमा Getcontact प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंलाई निश्चित फिचरहरू उच्चतम सीमामा प्रयोग गर्न अनिमति दिनका लागि हामी तपाईंलाई विभिन्न प्रकारका सदस्यताका विकल्पहरू प्रस्तावित गर्छौं । सदस्यता अफर र शुल्कहरू एक राष्ट्र देखि अर्को राष्ट्रमा भिन्न हुनसक्छ । यदि तपाईंको क्षेत्रमा Premium उपलब्ध छ भने तपाईंले प्रोफाइल पृष्ठमा गएर हाम्रा Premium अफरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ ।
के म आफ्नो नम्बर बदल्न सक्छु?
तपाईंले आफ्नो Getcontact खातामा आफ्नो नम्बर परिवर्तन गर्न सम्भव छैन । यदि तपाईंको हालको Getcontact नम्बर उपलब्ध छैन र तपाईंसँग नयाँ नम्बर छ भने तपाईंले हालको सदस्यता रद्द गर्न सक्नुहुन्छ र एपबाट लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसपछि तपाईं आफ्नो नयाँ नम्बरको लागि एउटा नयाँ खाता बनाउन सक्नुहुन्छ । हामी तपाईंका अधिकारहरू जस्तै, Premium सदस्यता, आदि नयाँ नम्बरमा ट्रान्सफर गर्नका लागि निम्न विधिहरू प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छौं ।
- यदि Premium चलानी Apple Store मार्फत गरिएको छ भने तपाईं एपको Premium पृष्ठमा “खरिदहरू पुनर्स्थापना गर्नुहोस्” ट्याप गरेर आफ्नो Premium सदस्यताका अधिकारहरू आफ्नो नयाँ नम्बरमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईंले चलानी गरिएको खातामा पहुँच गुमाउनुभयो भने तपाईंले आफ्नो Premium अधिकारहरू पनि गुमाउनुहुन्छ ।
- यदि चलानी क्रेडिट कार्ड वा मोबाइल अपरेटर मार्फत गरिएको छ भने, हामीलाई support@getcontact.com मा सम्पर्क गर्नुहोस् । एक Getcontact विज्ञले यो आवस्थामा जाँच गर्नुहुन्छ र तपाईंले खरिद गर्नुभएको कुरालाई तपाईंको नयाँ नम्बरमा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ । कृपया याद गर्नुहोस् कि यस्तो अवस्थामा यी खरिद गरेका कुराहरू तपाईंको पहिलेको नम्बरमा उपलब्ध हुन छाड्नेछ ।
सब्सक्रिप्सन प्याकेजहरुको फाइदाहरु के के हुन्?
हाम्रा ताजा सदस्यता प्याकेज र फिचरहरू हेर्नका लागि कृपया यहाँ जानुहोस्, https://premium.getcontact.com/
कसरी म एउटा सब्सक्रिप्सन सुरु गर्न सक्छु?
तपाईं तलको मेन्युको “अन्य” खण्डमा पाउन सकिने “Getcontact Premium” बाट Getcontact सदस्यता प्याकेज हेर्न सक्नुहुन्छ र चाहेमा नयाँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईं निम्न लिंकमा गएर क्रेडिट कार्ड वा मोबाइल अपरेटरबाट पैसा काटिने गरी पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ: https://premium.getcontact.com/ कृपया याद राख्नुहोस् कि Getcontact तपाईंको क्षेत्रभित्र उपलब्ध नहुन पनि सक्छ ।
कसरी म मेरो बाँकी लिमिटहरु थाहा पाउन सक्छु?
तपाईंले यी चरणहरू पालना गरेर आफ्नो बाँकी सीमाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ: अन्य> सब्स्क्रिप्सनहरू>सब्स्क्रिप्सन जानकारी ।
कसरी म एउटा नम्बर ब्लक गरेर त्यसलाई स्प्याम रिपोर्ट गर्न सक्छु?
“रिपोर्ट” बटन प्रयोग गरेर तपाईंले आगमन नम्बर खोजी गर्दा देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईंले पूर्व-परिभाषित वर्गहरूमा रिपोर्ट वा ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ ।
- यदि तपाईंले उक्त नम्बरलाई रिपोर्ट मात्र गर्नुभयो भने त्यसपछि तपाईंलाई त्यो स्पामको रूपमा देखाइनेछ ।
- यदि तपाईंले उक्त नम्बरलाई रिपोर्ट र ब्लक दुवै गर्नुभयो भने तपाईंले यो नम्बरबाट फोन प्राप्त गर्नुहुने छैन ।
के म Getcontact ले मेरो प्रोफाइलसँग जोडेको सूचनाको प्रति निवेदन गर्न सक्छु?
हो पक्कै पनि, हामीले डेटा पोर्टेबिलिटी फिचर निर्माण गरेका छौं जसमार्फत तपाईं आफ्ना सबै जानकारीहरूको प्रतिलिपि एक पठनीय डिजिटल ढाँचामा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ । प्रतिलिपि अनुरोध गर्नका लागि कृपया हाम्रो गोपनियता व्यवस्थापन केन्द्रमा जानुहोस् https://www.getcontact.com/manage
कसरी म आफैंलाई स्प्याम कलहरु बाट रक्षा गर्न सक्छु?
“सुरक्षा सक्षम गर्नुहोस्” बटनमा ट्याप गरेर तपाईं निर्देशनहरू अनुसार स्पाम सुरक्षा सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ ।
यो चरणपछि स्पाम स्क्रिनलाई तलतिर स्वाप गरेर र “स्पाम सेटिङ”मा “सेटिङ परिवर्तन गर्नुहोस्” मा ट्याप गरेर तपाईंले एउटा कुनै विकल्प चयन गर्न सक्नुहुन्छ, “सबै स्पाम कलहरू ब्लक गर्नुहोस्” र “स्पाम र जालसाजीपूर्ण कलहरूमा चेतावनी देखाउनुहोस्” ।
तपाईंले स्पाम सुरक्षा दुई तरिकाले सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ:
- एप इन्सटल गर्दा, यदि तपाईंले निश्चित अनुमति दिनुभयो भने स्पाम सुरक्षा सक्रिय हुन्छ ।
- तपाईंले यी अनुमतिहरू प्रदान नगर्नुभएको अवस्थामा, “सुरक्षा सक्षम गर्नुहोस्” मेन्युमा दिइएका निर्देशनहरू अनुसार तपाईंले स्पाम सुरक्षा सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई तपाईं तलको मेन्युको “स्पाम” ट्याबमा गएर पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ ।
के मेरो फोनबुक सम्पर्कहरु Getcontact प्रयोग गर्ने अरुहरुले खोज्न मिल्ने हुनेछ?
तपाईंको फोनबुकका सम्पर्कहरू Getcontact द्वारा कहिल्यै पनि सार्वजनिक वा खोज्न मिल्ने बनाइने छैन । तपाईंले आफ्नो मन्जुरीनामा प्रदान गर्नुभएको छ भने मात्रै तपाईंको फोनबुक सम्पर्कहरू पहुँच गर्ने अनुमति दिन सकिन्छ र यो तपाईंले जुन कुराको लागि अनुमति प्रदान गर्नुभएको थियो त्यसको लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । हामी हाम्रा सेवाहरू अप्टिमाइज गर्न वा विशेष फिचरहरू सक्षम गर्नको लागि तपाईंको फोनबुक पहुँच गर्ने अनुमति अनुरोध गर्न सक्छौं जसबारे एप्लिकेसनमा सहमति र अनुमति दिने प्रक्रियामा व्याख्या गरिनेछ । थप जानकारीका लागि, कृपया हाम्रो गोपनियताको कथन हेर्नुहोस् https://www.getcontact.com/privacy
मैले दुर्घटनावस एउटा नम्बरलाई स्प्याममा पठाए l म यो कसरी पहिलेको अवस्थामा लान सक्छु?
“अनब्लक” बटन प्रयोग गरेर तपाईंले उक्त नम्बरलाई अनब्लक गर्न र स्पाम सूचीबाट हटाउन सक्नुहुन्छ ।
तलको मेन्युमा “स्पाम” क्लिन गरेर र त्यसपछि पृष्ठलाई तल स्वाइप गरेर तपाईंले “स्पाम सेटिङहरू” बाट “ब्लक सूची” पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ र दायाँतर्फ स्लाइड गरेर तपाईंले स्पाम चिन्ह लगाएको नम्बरलाई स्पाम सूचीबाट हटाउन सक्नुहुन्छ ।
मेरो फोन नम्बर स्प्याम भनेर सुचीबद्ध छ l
Getcontact ले एक अत्याधुनिक एल्गोरिदम प्रयोग गरेर नम्बरहरूलाई स्पामको रूपमा पहिचान गर्छ । यदि तपाईंलाई आफ्नो नम्बर भुलवश स्पाममा राखिएको छ भन्ने लाग्छ भने कृपया हामीलाई support@getcontact.com मा सम्पर्क गर्नुहोस् । तपाईंको नम्बरलाई Getcontact विज्ञले अनुसन्धान गर्नुहुनेछ । हामी पहिले नै हाम्रो स्पाम फिल्टरमा भएको तपाईंको नम्बरमा हामी कुनै परिवर्तन गर्छौं वा त्यहाँबाट हटाउनेछौं भन्ने बारेमा कुनै ग्यारेन्टी दिन सक्दैनौं ।
एउटा फोन नम्बर कसरी स्प्यामको सुचीमा जान्छ?
स्पाम पहिचान एक विशेष एल्गोरिदम प्रयोग गरेर विकास गरिएको हो जसले तपाईंको सुरक्षालाई उच्च स्तरमा राख्छ । Getcontact ले लाखौँ प्रयोगकर्ताहरूका प्रतिक्रिया समीक्षा गर्छ र कुनै कल स्पाम हो कि होइन भनेर निर्णय गर्छ । हामीले दिन प्रतिदिन यसतर्फ आफ्नो प्रविधि सुधार गर्न निरन्तरता दिइरहेका छौं ।
के म त्रुटीहरु रिपोर्ट गर्न सक्छु?
"हामी तपाईंका प्रतिक्रियालाई स्वागत गर्छौं र हाम्रा सेवाहरू तपाईंको समर्थन पाउँदा मात्र निरन्तरता दिन सकिन्छ । त्यसैले हामीलाई यहाँ सम्पर्क गर्न नहिच्किचाउनुहोला ।
तपाईं एपमा भएको मद्दत>हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् खण्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
तपाईं यो लिंकमा गएर त्रुटिहरू रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ: https://www.getcontact.com/send-report
तपाईंले हामीलाई इमेल मार्फत प्रतिक्रिया दिंदा कृपया निम्न जानकारी दिन नबिर्सनुहोस्!
हाल आफू रहेको देश:
प्लेटफर्म (Android, iOS, वेव):
त्रुटी कोड 5001 के हो?
Getcontact सर्भरहरूमा आएका अस्थायी समस्याले गर्दा तपाईंले यो त्रुटि प्राप्त गर्नुभएको हुन सक्छ । तपाईं एपबाट बाहिरिएपछि केही समयको लागि पर्खन सक्नुहुन्छ र फेरि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ । यदि समस्या समाधान नभएमा हाम्रो ग्राहक सहायतालाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।
त्रुटी कोड 5003 के हो?
यो त्रुटि कोड देखिनुका धेरै कारणहरू हुन सक्छन् । एप प्रयोग गर्न तपाईंसँग सक्रिय इन्टरनेट जडान हुनुपर्छ । कृपया आफ्नो इन्टरनेट जडान जाँच गर्नुहोस् । केही IP वा डोमेनहरूमा सरकारले पहुँचमा लगाएको प्रतिबन्धके गर्दा पनि यो समस्या आएको हुन सक्छ । यदि समस्या समाधान नभएमा हाम्रो ग्राहक सहायतालाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।
कसरी म मेरो सब्सक्रिप्सनहरु व्यवस्था गर्न सक्छु ?
तपाईंले खरिद गर्नको लागि प्रयोग गर्नुभएको च्यानलमा आफ्नो सब्सक्रिप्सनहरु व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ l
गुगल प्ले स्टोर मार्फत खरिद गरिएको सब्सक्रिप्सनहरुको लागि: सब्सक्रिप्सनहरु मेनु > सब्सक्रिप्सनहरु पेजबाट व्यवस्था गर्न सकिन्छ साइनइन पछि निम्न लिंक फलो गरेर https://play.google.com/store/account/subscriptions
एप्पल स्टोर मार्फत खरिद गरेको सब्सक्रिप्सनहरुको लागि: सब्सक्रिप्सनहरु सब्सक्रिप्सनहरु "आफ्नो सब्सक्रिप्सनहरु व्यवस्था गर्नुहोस्" ट्याप गरेर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ निम्न लिंक फलो गरेर साइनइन गरेपछि "आफ्नो सब्सक्रिप्सनहरु व्यवस्था गर्नुहोस्" बटन ट्याप गरेपछि व्यवस्था गर्न सकिन्छ https://support.apple.com/en-us/HT202039
वेभसाइट मार्फत खरिद गरेको सब्सक्रिप्सनहरुको लागि: सब्सक्रिप्सनहरु निम्न चरणहरु पछ्याएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ जब तपाईंले निम्न लिंकमा साइनइन गर्नुहुन्छ https://premium.getcontact.com
"प्रोफाइल पेज > भुक्तानी र सब्सक्रिप्सनहरु > सब्सक्रिप्सन योजना व्यवस्था गर्नुहोस्"
कृपया नोट गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो योजनामा उपलब्ध आफ्नो लिमिटहरु प्रयोग गर्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईंले भुक्तानी गर्नुभएको समयको बेलामा, यद्दपी तपाईंले आफ्नो सब्सक्रिप्सन रद्द गर्नुभएपछि पनि l जब एउटा सब्सक्रिप्सन रद्द गरिन्छ, पहिलेको सब्सक्रिप्सन अवधिको लागि तिरेको शुल्क फिर्ता हुनेछैन र फेरी बिलिंग चक्र अगाडी रद्द भएको इन सब्सक्रिप्सनहरु सुरु हुन्छ, बाँकी अवधिको लागि शुल्कहरु फिर्ता हुनेछैन l
प्रतिलिपि अधिकार © 2016-2021 Getverify LDA.। सर्वाधिकार सुरक्षित। Getcontact™ एक दर्ता गरिएको ट्रेडमार्क हो।